MUSIIBO: Silsilad Dhaawacyo Ah Oo Ku Habsatay Chelsea Iyo Xiddigii Labaad Oo Dhaawac Lagaga Saaray Kulanka Arsenal - Gool24.Net
MUSIIBO: Silsilad Dhaawacyo Ah Oo Ku Habsatay Chelsea Iyo Xiddigii Labaad Oo Dhaawac Lagaga Saaray Kulanka Arsenal
Chelsea ayay dhibaatooyin dhaawacyo ah lasoo darseen kulanka finalka FA Cup ee ay Arsenal kula ciyaarayso garoonka Wembley Stadium, waxaana dhaawac lagaga saaray laba ciyaartoy oo muhiim ah.
Daqiiqaddii 35aad ee ciyaarta ayaa garoonka laga saaray difaaca reer Spain ee kabtanka u ah Chelsea ee Cesar Azpilicueta oo uu booday muruq, xilli uu isku dayay inuu kubadda kula tartamo weerarka Arsenal, waxaana lagu soo beddelay Andreas Christensen oo daqiiqadihii dambe ee qaybta hore kooxdiisa khadka dambe la taagnaa Kurt Zouma iyo Antonio Ruediger.
Azpilicueta ayaa Chelsea iskugu daray gool rikoodhe ah oo uu ku keenay markii uu xerada ganaaxa dhexdeeda jiitay Aubameyang, oo gool ku laaggii loo dhigay u beddelay gool ciyaartana ka dhigay 1-1 iyo bixitaankiisa dhaawaca oo wiiqay qorshihii Frank Lampard ee ciyaarta.
Qaybtii labaad ayuu mar kale madax-xanuun kale haleelay Lampard, waxaana garoonka laga saaray xiddiga goolka hore u dhaliyey Christian Pulisic oo uu muruqa luga midig booday isaga oo goolka kula baxay kubadda, isla markaana si fiican u laagi kari waayey.
Pulisic ayaa helay fursad uu hoggaanka kooxdiisa ugu sii dheereeyo, hase yeeshee markii uu ku dhowaaday xerada ganaaxa ayaa uu xanuun dartii cabaaday, safkana kala qaaday isaga oo wali isku dayaya inuu gool dhaliyo, laakiin waxay dantu ku kalliftay inuu kubadda iska laago, isla markaana dhulka isku tuuro.
Tababare Lampard ayaa si aad ah uga naxay dhaawaca Pulisic, waxaana falcelintii uu sameeyey ay noqotay inuu sii jeedsaday oo uu indhaha siin kari waayey, waxaana garoonka laga saaray xiddiga reer Maraykan oo garbaha la hayo.
Pedo Rodriguez oo xili ciyaareedkiisii ugu dambeeyey ku qaadanaya Chelsea, ayaa lagu soo beddelay